Wararka - Iibinta Shirkadda ayaa Mar kale Kordhaysa Baahida Taagta daran Qeybta Koowaad ee Sannadkan
Tan iyo bilowgii 2014, qiimaha alaabada ceeriin ee tungsten waa la sii waday hoos, xaaladda suuqa waxay ku jirtaa xaalad mugdi ah iyadoon loo eegin suuqa gudaha ama suuqa dibedda, dalabku aad ayuu u liitaa. Warshadaha oo dhami waxay u muuqdaan inay yihiin jiilaal qabow.
Iyaga oo wajahaya xaaladda halista ah ee suuqa, shirkaddu waxay sameysaa dadaal kasta oo ay ku casriyeynayso nooca iibka ayna ku horumarinayso wadiiqooyinka cusub ee iibka, inta ka horreysana, shirkaddu waxay alaab cusub oo alaab ah u geynaysaa suuqa si ay u hesho fursad cusub iyo saamiyado badan oo suuqa ah.
Qeybtii hore ee sanadkii 2015, iibinta alaabada muhiimka ah ayaa mar labaad kordhay marka loo barbardhigo isla muddadii sanadkii la soo dhaafay, iyadoo lagu saleynayo in iibka 2014 uu si aad ah uga kordhay iibka 2013.
Badeecadaha birta ah ee loo yaqaan 'Tungsten' iyo budada carbide ee iibka ah ayaa la gaarsiiyey in ka badan 200 metrik ton bil kasta saddexda bilood ee ugu dambeeya. Iibintu waxay ku dhacdaa heerka taariikheed. Ilaa dhammaadka Juun, tirada iibku waa 65.73% ee iibka qorshaysan ee sannadkan, sidoo kale wuxuu 27.88% ka sarreeyaa iibka isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay.
Tirada iibka carbideska sibidhka ayaa 3.78% ka sareeya iibkii isla muddadaa sanadkii la soo dhaafay.
Tirada iibka qalabka qiimahoodu waa 51.56% ee iibka qorshaysan ee sanadkan, iyo 45.76% ayaa ka sareeya iibka isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay, sidoo kale waxay gaadhay heer sare oo taariikhi ah.
Qalabka Jarista Carbide, Qalabka Carbide, Carbide Cemented, Dhuxulada Dhamaadka Carbide Solid, Cemented Carbide Endmill, Mashiinka Mashiinka,